SHAN QODOB oo madaxweyne Farmaajo ku khasbaya inuu gorgortan ka galo doorashada.
Puntlandtimes (Garoowe)-Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa cadaadis xooggan ku saaraya saddexda madaxweyne goboleed ee Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo Galmudug qabashada doorashada labada aqal ee barlamaanka Soomaaliya.
Madaxweynayaasha saddexda maamul ayaa waxa ay ka caga jiidayaan doorashadaasi maadaama culays xoogani kaga yimid beesha caalamka, musharixiinta madaxtinimada Soomaaliya iyo maamulada Jubbaland & Puntland oo diidan qaabka wax u socdaan.
Haddaba madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxaa soo food saaray culaysyo kala duwan oo ku khasbaya inuu ka tanaasulo qorshaha socodsiinta doorasho aan loo dhammayn iyo inuu heshiis la gaaro dhinacyada ka soo horjeeda xilligaan.
Qodobada madaxweyne ku khasbi kara inuu wadahadal ka galo doorashada waxaa kamid ah:
1- Muddo 25 cisho ah oo ka dhiman muddo xileedkiisa iyo wax heshiis ah oo aan weli laga gaarin doorashada dalka
2- In marka uu dhammaado muddo xileedkiisu uusan yeelan doonin awood dastuuri ah, taasi oo sababaysa inuu xafiiska doorashadiisa dedejiyo.
3- In uu jiro culeys badan oo dhanka beesha caalamka ah oo madaxweynaha la saaray muddooyinkii ugu dambeeyay.
4- Cabsi uu ka qabo in uu sabab u noqdo qalalaaso dagaal ama rabashado dalka ka dhaca.
5- In madaxweyne goboleedyadii ku garabka ahaa ee uu isku haleynayey ay ka cago jiidayaan inay qabtaan doorasho aan wadar ogol aheyn.
Maanta sidii nin weriye ah oo dhexdhaxaad ah oo wuxuu qorayo iska soo tafatiray baad usoo qorteen maqaalkan. Marka weriye soo dhigo war ama falló waa inuu dadweynaha akhrisaya u dhaafaa fikirkooda , ka dib marka uu soo bandhigo adobo ama waaqiga jira, waa in maqaalkaasi tafatiran yahay, dhinacyo kala duwan laga eegay, isla markaana xaqiiqda meesha taala ka turjumaya ( Reality on the ground), weriyuhu ma aha inuu soo qaato warar aan sugnayn oo source ka ay ka soo baseen ahayn mid cad oo lagu kalsoon yahay, looma baaha ku-tidhi-ku-teen, Rumour story, waa inuu iska ilaaliya erayada muqdiga gelin kara warkiisa, sida warar la iska dhex marayo, sida laga sheegay, hebel oo Ła bahdilay, dhulka Ła jiiday iwm
Wariyuhu waa inuu noqdaa dhexdhaxaad Isla markaana iska ilaaliya innu noqdo microphone lagu hadlo, warkaaga markaa waa loo kala dheerayn dona
Ninkaagan Ahmed Ali sheegtay waxaa tahay TPLF caruurteedii. Waxaan kula talin lahaa in aad caqliga ka kortid oo aad wadaniyada iyo difaaca dalka Soomaaliya ku fakartid. Aduunka hada waxaa ka dhamaanaya shaqadii dabo-dhilif nimada, ee dadkaaga dhinac ka raac.
Madaxwayne Farmaajo inuu Tunaasil sameeeyo Dalka Iyo dadka masirkooda ilaaliyaaa waxay midtahay masuuliyada Saraan waana Doorka Keliya ee hada uqadankaro maamaada Xaalku marayo meel aan layska dhegotirikarin
Doorashada waxaa hortaagan puntland iyo jubaland anigu gartay waxa puntland ku doodayso oo waa gobolka gedo lkn weli ma aan fahmin waxa Puntland ay tabanayso ee ay ku doodayaan, mise cid aan is difaaci karin bay difaacayaan xuquuqdooda
Sorry waxaan u jeedaa jubaland
CAQLI, waa nin madaxa laga maray ee cudur qabiil ku dhacay, allaha caafimaadsho.